Shure သည် NAB 2017 တွင်Axient®ဒီဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Shure NAB 2017 မှာAxient®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်မိတ်ဆက်
Shure NAB 2017 မှာAxient®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်မိတ်ဆက်
နိုင်းမြစ်, မကျန်းမမာ။ ဧပြီလ 26, 2017အဆိုပါ 2017 မှာ -Today, NAB ပြရန် Las Vegas မှာ, Shure ယင်း၏Axient®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အတွက်အသစ်ကဝန်ကြီးချုပ်ကြိုးမဲ့ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် Shure'' s ကိုအောင်မြင်သောအစုစုကို, Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်အားလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဏ်ဍာနှင့်အခြေအနေများအဘို့အကိုက်ညီယနေ့အထိအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ကြိုးမဲ့ပလက်ဖောင်း, ဖန်တီးရန်ကုမ္ပဏီ၏လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-R®, ULX-D®၏သာလွန်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် Axient ကြိုးမဲ့စနစ်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်။ ဖောက်သည်ဖြစ်ပေါ်နေသောဖို့သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့လိုအပ်ပါတယ်-အထူးသဖြင့်ဆက်လက် RF spectrum ကိုဖိအား-Axient တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ် high-performance ကို RF, ခြွင်းချက်အသံအရည်အသွေး, command ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။
Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ယင်း၏နှစ်ခု transmitter ကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာ, အအေဒီစီးရီးနဲ့ ADX စီးရီးတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်မယ့်လက်ခံပါရှိပါတယ်။ အေဒီစီးရီးက transmitter နှင့်အတူ Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြွင်းချက် RF စွမ်းဆောင်ရည်, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် Networking အပါအဝင်အဓိကထုတ်ကုန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးကြီးမားတဲ့အဆင့်ကယ်တင်တတ်၏။ Axient ဒစ်ဂျစ်တယ် ADX စီးရီးက transmitter ်ရောက်စွက်ဖက် detection နဲ့ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အတူအားလုံး transmitter ကို parameters များကို Real-time ထိန်းချုပ်မှုထောက်ပံ့ပေးသော ShowLink, ထည့်သွင်း။ အဆိုပါ ADX စီးရီးလည်း သာ. ကွီးမွတျဆိနှင့်နှစ်သိမ့်အားဖွင့်တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံ Self-tuning အင်တင်နာနှင့်အတူပထမဦးဆုံး micro-bodypack ပါဝင်သည်။
"နှစ်ပေါင်းများစွာ, Shure ချောမွေ့စွာ, နှောင့်ယှက်-အခမဲ့ဘဏ်ဍာကိုထောက်ပံ့သောပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဖြေရှင်းချက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြိုးမဲ့အသုံးပြုသူများကိုတွဲပြီးအလုပ်လုပ်, ဖြစ်ပွားနေသောရောင်စဉ်စကားပြောဆိုမှုများ၏ရှေ့တန်းမှာဖြစ်, "နစ်ခ်ဝုဒ်မှာကြိုးမဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက် Category: ဒါရိုက်တာပြောပါတယ် Shure။ "RF ရောင်စဉ်၏တိုးမြှင့်စိန်ခေါ်မှုများအားကြောင့်အသုံးပြုသူများဝေဟင်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်မှု၏အရေးပါသောအသံသွင်းအားစုကယ်မနှုတ်နိုင်မယ့်စနစ်ကမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်သောအစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ မတူနိုင်တဲ့ RF တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရောင်စဉ်တန်းထိရောက်မှုနှင့်အတူ Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်အသုံးပြုသူများသည်လိုအပ်သောလိုင်းများ၏နံပါတ်အကြီးသို့မဟုတ်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ, မရရှိနိုင်ရောင်စဉ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးထားပါတယ်။ "
အသုံးပြုသူများနှင့် applications များအမျိုးမျိုးများအတွက်စံပြ, Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်မြောက်မြားစွာအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ features နဲ့အကျိုးခံစားခွင့် features:
high-စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို RFပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဏ်ဍာတောင်းဆိုသောစွမ်းရည်များအားလုံး -Incorporating, Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်အများဆုံးအချက်ပြတည်ငြိမ်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာသိသိသာသာကျောင်းထွက်စေနိုင်သည်ကို signal ကို်လည်းကြွေတတ်သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ဘို့အလားအလာလျော့ပါးစေရန်, Quadversity ™လက်ခံနည်းပညာနှင့်အတူစစ်မှန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်မတူကွဲပြားမှုပါရှိပါတယ်။ Quadversity mode ကိုအသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောဇုန်မှာမတူကွဲပြားမှုတွေအင်တာနာ၏အစုံနေရာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတည်းဇုန်အတွက်အင်တာနာ၏နံပါတ်နှစ်ဆ, စိန်ခေါ်မှု enviroments မှာ RF signal ကို-to-ဆူညံသံတိုးတက်လာဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ခြွင်းချက်အသံအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာသိပ်သည်းဆမြင့် mode ကို, (17-MHz တီဗီတီးဝိုင်းနှုန်း 47 မှ6ထံမှ) 23-MHz တီဗီတီးဝိုင်းနှုန်း 63 မှ 8 ကနေအများဆုံးတစ်ပြိုင်နက် system ကိုရုပ်သံလိုင်းအရေအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။
အသံအရည်အသွေးDante နဲ့ AES3 ကနေတဆင့်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ -Featuring, Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်အကြိမ်ရေတုံ့ပြန်မှုများနှင့်တိကျမှုယာယီတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ kHz အကွာအဝေး 20 တစ် 20Hz ရှိပါတယ်။ Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုလည်း Analog စ output ကိုမှကျယ်ပြန့် dynamic range ကို, AES-256 encryption ကိုကို၎င်း, မိုက်ကရိုဖုန်း transducer တစ်ဦးထံမှစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင် 2ms အောင်းနေချိန်ပါတယ်။
စစ်ဌာနချုပ်နှင့်ထိန်းချုပ်ရေး-Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့Workbench®အဖြစ် ShurePlus ™လိုင်းများအကျိုးရှိစွာထိန်းချုပ်မှုနှင့် configuration များအတွက် App ကို, အကောင်းဆုံး spectrum ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကြိမ်နှုန်းစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်၏ Dante Cue နှင့် Dante Browse ကို features တွေမဆို Dante-enabled ချိတ်ဆက်ကိရိယာမှအသံ output ကိုမြင့်မားသစ္စာနားကြပ်စောင့်ကြည့်မှုကို enable ။ ထို့အပြင် Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်စမတ်, high-performance ကိုဘက်ထရီနဲ့အားသွင်းတဲ့ suite ကိုကနေတဆင့်ကွန်ယက်အားသွင်းပေးထားပါသည်။
Hardware နဲ့အရွယ်မှာအားလုံးက transmitter နှင့်အသံဖမ်းများအတွက် 184 MHz အထိများ၏ -Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ကျယ်ပြန့် tuning အကွာအဝေးရောင်စဉ်တစ်ခုတိုးချဲ့အကွာအဝေးကိုဖုံးခြင်းနှင့်စာရင်းရိုးရှင်းစွာ။ အေဒီနှင့် ADX က transmitter ထောက်ပံ့ဘုံလက်ခံပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ် dual နှင့် quad လက်ခံ options တွေကိုအသုံးပြုသူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအမြင့်ဆုံး။
Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ယင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ် Shure ဘက်ထရီတစ်ခုတည်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းထိန်သိမ်းအာကာသအတွင်းရှစ်အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီအထိကိုထောက်ပံ့ပေးသောအားသွင်းကိရိယာ (SBRC), ထိန်သိမ်း။ တစ်ဦးချောမွေ့စွာ, ခရီးစဉ်-အဆင်သင့်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေး, အ SBRC တာဝန်ခံအခြေအနေ, အချိန်-to-အပြည့်အဝနှင့်ဘက်ထရီကနျြးမာရေးညွှန်းကိန်းအပါအဝင်အရေးပါသောဘက်ထရီ parameters တွေကို, ဖော်ပြပေးသောလွယ်ကူသော-to-ကိုဖတ်ပြီးရှေ့ panel ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ, Shure ကြိုးမဲ့လုပျခှငျနှင့် ShurePlus လိုင်းများ software ကိုဘက်ထရီ status ကိုခြေရာခံရန်အ SBRC ၏ဝေးလံသီခေါင်စောင့်ကြည့်ရေးပေး။
"Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျော်လွှားရန်တက်မြေပြင်ကနေဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီးစိန်ခေါ်မှုများအသုံးပြုသူများသည် applications များအပါအဝင်လိုလားသော Tours, ပြဇာတ်ရုံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်နေတဲ့ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်ကြုံတွေ့ရ," မိုက်ကယ် Johns မှာကုန်ပစ္စည်း Manager ကဆိုပါတယ် Shure။ "ထိုကဲ့သို့သောကြိမ်နှုန်းမတူကွဲပြားမှုလက်ကိုင်မိုက်ကရိုဖုန်း (ADX2FD) နှင့်တစ်ဦး Self-စာပြည်တွင်းရေးအင်တင်နာ (ADX1M) နဲ့ထူးခြားတဲ့ Micro-bodypack အဖြစ်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများအပါအဝင်, Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောနှောနှစ်ဦးစလုံးအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အခွက်တဆယ်စိတ်ချလက်ချထဲမှာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအပေါ်မှီခိုအားထားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှု၏အလယ်။ "
အဆိုပါအေဒီစီးရီးနှောင်းပိုင်းတွင်နွေရာသီ 2017 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်, နှင့် ADX စီးရီးအစောပိုင်း 2018 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Axient ဒစ်ဂျစ်တယ်အပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတျအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် Shure တဲ (ဗဟိုခန်းမ #C2218) အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန် သို့မဟုတ်သွားရ www.shure.com.
အကြောင်းအရာ Shure ထည့်သွင်း
1925 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Shure ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (www.shure.com) ကျယ်ပြန့်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အသံအီလက်ထရွန်းနစ်၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ နှစ်တွေကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တန်ဖိုးဒဏ္ဍာရီဖြစ်လာကြပြီအများအပြားအရည်အသွေးမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စားသုံးသူအသံထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Shure'' s ကိုကွဲပြားခြားနားထုတ်ကုန်လိုင်းကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကို wired မိုက်ခရိုဖုန်း, ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များ, In-နားကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ, conferencing နှင့်ဆွေးနွေးမှုစနစ်များ, ကွန်ယက်အသံစနစ်များ, ဆုရနားကြပ်နဲ့နားကြပ်နှင့်ထိပ်တန်း rated ဓာတ်စက်သည့်အရာတစ်ခုပါဝင်သည်။ ယနေ့ Shure ထုတ်ကုန်အသံစွမ်းဆောင်ရည်ဟာထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်အခါတိုင်းပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
Shure ဆွဲသွင်းပါဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, မြစ်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းထက်ပို 30 နောက်ထပ်ကုန်ထုတ်စက်ရုံများနှင့်အမေရိကတိုက်တစ်လျှောက်လုံးဒေသဆိုင်ရာအရောင်းရုံးများ, EMEA နှင့်အာရှနှင့်အတူ, Eppingen, ဂျာမနီ, နှင့်ဟောင်ကောင်, တရုတ်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနချုပ်ရှိတယ်။
ကန်ဒန်း Wicker အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Shure NAB 2017 မှာAxient®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်မိတ်ဆက် - ဧပြီလ 26, 2017
Pop ဂီတရဲ့ပြိုင်ပွဲ Shure နှင့်အတူဆွတ်ခူး '' တွင်၎င်းသည် သီချင်းဆို. '' - သြဂုတ်လ 16, 2016
NAB မှာနယူး: Shure ULX-D နှင့် QLX-D နှင့် WWB 6.12 များအတွက် VHF ကြေညာ - ဧပြီလ 18, 2016
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit တီဗီနည်းပညာ 2017-04-26
ယခင်: သဟဇာတ VOS (TM) တိမ်တိုက်နှင့် VOS 360 Solutions မှ Market က-ဦးဆောင်ပလေးအောက်ကိုစှမျးဆောင်ကြဉ်း
နောက်တစ်ခု: အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - Temp